Shiinaha wershadeynta Hawada Hawo-Jirin (COPD Therapy) warshadleyda iyo soosaarayaasha | Micomme
Qaabdhismeedka neefsashada badan ayaa bixiya xulasho badan
Taxanaha Sepray I wuxuu leeyahay qaabab neefsasho badan:CPAP, S, T, iyo S / T, VAT iyo PC si ay ula kulmaan bukaanka baahiyo kaladuwan.
Qaabka 'S / T' wuxuu si gaar ah ugu yahay bukaanka COPD iyo II ee bukaanka ku dhaca dhuumaha neefsashada, si ay u keenaan waayo-aragnimo neefsasho oo dabiici ah oo dheellitiran. Habka VAT waxaa loogu talagalay bukaanka qaba COPD, buurnida buurnaanta buurnida iyo mugga mugga hooseeya. Qaabka PC-ga waxaa loogu talagalay bukaannada leh heerka neefsashada deg-degga ah, mugga hooseeya iyo hypoxemia.
Xaddiga cadaadiska waa 4-30cm H2O. Heerka cadaadiska sare wuxuu si joogta ah u siin karaa cadaadis daaweyn wax ku ool ah oo xasilloon iyo
Soosaarka soo-baxa si loo ilaaliyo saameynta daaweynta.
Algorithm cusub oo cilmiyaysan si loo ogaado dhacdooyinka kala duwan, si toos ah u hagaaji cadaadiska.
Tikniyoolajiyada xakamaynta cadaadiska otomatiga ah ayaa si otomaatig ah u sax ah u kormeeri kara una garan kara dhacdooyin kala duwan oo neefsashada ah, jawaab celin waqtigeedu hooseeyo oo hawo-qaadis ah, xannibaad xaddidan, hawo-mareen joogto ah, iwm, oo si wax ku ool ah u tirtiraya calaamadahaas.
Cadaadis toos ah ayaa la socda
6 nooc oo falcelin ah
Tiknoolajiyada Xaqiijinta Cilmiga (VAT)
Si otomaatig ah ayey u qiyaaseysaa cadaadiska loo baahan yahay si loo waafajiyo mugga bartilmaameedka iyadoo loo eegayo isbeddelka bukaanka oo ay siiso si kordheysa IPAP iyo EPAP.
Qulqul xoog leh oo hufan
Laydhka tayada sare leh ee la keenay oo leh 43000bpm xawaare daqiiqaddii, waxay siisaa awood neefsasho joogto ah oo leh xoog badan, hufan oo sax ah, waxayna bixisaa magdhow qulqulaya hawada. Jawaabta heerka Cadaadiska Degdega ah, waxqabadka xasilloonida iyo aamusnaanta.
Moodel S1 T1 T2 T3 T5 P1
Moodel CPAP, S, S / T CPAP S, S / T CPAP, S, TS / T, VAT CPAP, S, S / T CPAP, S, T, S / T, VAT CPAP, S, T, S / T, VAT, PC
Xaddiga cadaadiska 4-20cm H2O 4-25cm H2O 4-25cm H2O 4-30cm H2O 4-30cm H2O 4-30cm H2O
Saxnimada cadaadiska .2 0.2cm H2O
Cadaadiska Max.O 30cm H2O
Waqtiga Ramp 0 illaa 45 daqiiqo （5-daqiiqo oo koror ah
Gargaarka cadaadiska ee COMF Heerka 1-3
Heer humid 1-5 heerarka （113 ilaa 185 ℉ 23 illaa 85 ℃）
Waqti kac Heerarka 1-6 (S, T, S / T)
Awoodda kaydinta xogta 8G USB disk
Heerka codka micnahiisa ≤30dB